Iyo Nhamo yeMacbeth ichavhara iyo 65th BFI London Film Festival | Ndinobva mac
Dambudziko reMacbeth, kuvhara iyo 65th BFI London Film Festival
Manuel Alonso | | Apple TV, dzakawanda
Muna Chivabvu wegore rino, Apple TV + yakasimbiswa kuve yakachengetedza kuratidzwa kwemutambo uri kuuya Mutambo waMacbeth nemutungamiriri uye munyori Joel Coen, zvichibva pamutambo wekutanga wakanyorwa naWilliam Shakespeare. Panguva iyoyo, Apple yakasimbisa kuti yaive zvakare ichisimbisa kubatana kwayo nechikwata chekugadzira cheA24 kuunza iyo firimu kwete kungoita skrini diki kuburikidza neApple TV +, asiwo kune mamwe mafirimu skrini.
Macbeth anoenzanisira zvinoitika panyama uye nepfungwa zvemagariro ezvematongerwo enyika. Zvichida kuti basa iri rakaitwa naWilliam Shakespeare ndiro rinonyatsoratidza hukama hwemunyori wemitambo nemambo wake.Ndosaka zvichigona kunzi ndizvo zvakanyanyisa zvemunyori uye ndosaka zvichishamisa uye inorumbidzwa nepasi rose. Neichi chikonzero, zvakajairika kuti chirongwa ichi chine chiyero chakadai chine mutambi wepamusoro soro: Denzel Washington. Izvo zvinoenderana neApple TV + zano rekuve nezvakanakisa.
Isu hatisati tine zuva rekuburitsa mumitambo kana paApple TV + yemutambo uyu kubva kumunyori ane mukurumbira. Nekudaro, kana iwe uine rombo rakaringana rekujoinha avo vakasarudzwa kuti vapinde gore rino BFI Firimu Mutambo, iwe uchave unokwanisa kuona zvekare-kuratidzwa. Mutambo ichaita kuratidzwa kwayo kweEuropean kuGala LFF, iyo Royal Mutambo Horo kuSouthbank Center. At chiziviso chepamutemo Yemazuva ano Firimu Mutambo, chiitiko chakasimbisa kuti director wefirimu uye munyori wezvekunyora, Coen iye, achaitawo kuonekera pakuratidzira. Coen pachake akati:
Shakespeare ndeyenyika, asi anobva kuGreat Britain. Sezvo ndakwereta nhaka yetsika nemagariro, uye ndave nerombo rakanaka rekushanda pamwe nevamwe vatambi varo vakapenya, ndinokudzwa kuunza iyi firimu kuLondon Film Festival ku kuratidzwa kwayo kwekuEurope.
Mutambo wechi65 BFI yakabatana neAmerican Express inoitwa neChitatu Gumiguru 6 kusvika Svondo Gumiguru 17, 2021. Kuvhurwa kwechirongwa LFF ichaitika neChipiri, Gunyana 7, 2021.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Dambudziko reMacbeth, kuvhara iyo 65th BFI London Film Festival
Maitiro ekudzora windows muiyo icon yekushandisa
Tetris Beat anouya kuApple Arcade